Burma Partnership » UNFC Statement on 2015 General Election Result
By United Nationalities Federal Council • November 12, 2015
We would like to mention that we have to put on record and express our special thanks to the government led by President U Thein Sein for holdingafree and reasonably transparent general election on November 8, 2015, and the people of all the nationalities, who have eagerly cast their ballots. We, the UNFC, recognize, take pride and are delighted for the National League for Democracy (NLD), which has achieved substantive victory and all the ethnic political parties and the representatives. We also feel pleased and satisfied with the political parties and their representatives’ respect for and acceptance of the decision of the people by vote, in accordance with the democratic practices.
Though the Election Commission still cannot release the final election results up to this day, the exit vote has indicated that the NLD is inaposition to form the government and has gainedalandslide victory, like in the 1990 election. We, the UNFC, hope and believe that the authorities concerned would recognize, respect and honor the election results and would transfer power peacefully and inadignified manner.
We would like to urge the NLD, after formation of the government and in resolving the country’s multifarious problems in consultation and cooperation with relevant forces, parties and organizations, to give priority to the programs of ending the civil war, nurturing national reconciliation, amending the 2008 constitution, establishing democracy andafederal union, with full guarantee for national equality and self-determination.
Though the current government led by the Union Solidarity and Development Party has signed the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) with some Ethnic Armed Organizations (EAO), many organizations are left out. Military clashes are still taking place in the Kachin and Shan States. As the Myanmar Tatmadaw has been launching furious offensives against Wanhai Headquarters of the Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA), with the use of ground forces and air power, many local people have been killed, many hearths and homes have been destroyed and many thousands have to flee and hide in the jungles and hills. Moreover, we have learnt that some civilians have been interned as hostages. If such attacks are taking place, internal peace and national reconciliation will not be able to be realized.
For that reason, we seriously call on the current government and the government coming next into power, to halt immediately the Myanmar Tatmadaw’s resolution of problem by military means and call for political dialogue and negotiation, keeping the objectives of internal peace and national reconciliation in mind.
We, the UNFC, would like to affirm our readiness to continue discussions and consultations with the current government, as well as the government coming next into power, for the establishment of internal peace andagenuine and democratic federal union.
Nai Han Tha – Vice President Phone: +66(0)80-503-0849
UNFC ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၁။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သောအစိုးရမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်ပြီး အထိုက် အလျှောက် ပွင့်လင်းမြင်သာသော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကျင်းပပေးခြင်းနှင့် စိတ်အားထက်သန်စွာ မဲပေးခဲ့ကြသည့် လူမျိုးစုံပြည်သူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြလိုပါ သည်။ ဤရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် သိသိသာသာ အနိုင်ရရှိကြသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးအတွက် မိမိတို့(UNFC)မှအသိအမှတ် ပြုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ရပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ဘက် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အရ ပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒမဲအဆုံးအဖြတ်ကို လေးစားခံယူကြသည့်အတွက်လည်း နှစ်ထောင်း အားရ ဖြစ်မိပါသည်။
၂။ ရွေးကောက်ပွဲ၏မဲရလဒ်ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ယနေ့ထိတိုင် အပြီးသတ် တရားဝင်မထုတ်ပြန်နိုင်သေးသော်လည်း နောက်ဆုံးရလဒ်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် (NLD)မှ အစိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့် ညွှန်းကိန်းကိုဖေါ်ပြနေပြီး၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကဲ့သို့ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရမည့်အနေအထားပင် ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ရရှိလာသည့်ရလဒ်များကို အသိအမှတ်ပြုလေးစားလိုက်နာပြီး ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိရှိ ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်ဟု မိမိတို့(UNFC)မှ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါသည်။
၃။ (NLD) အနေဖြင့်အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းပြီး သည့်နောက် နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ရှိနေသော ပြသနာများစွာအနက် ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး၊ ၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌါန်းခွင့် အပြည့်အ၀ ရှိသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာအင်အားစု ပါတီ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဖေါ်ဆောင်သွားရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
၄။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဦးဆောင်နေသောလက်ရှိအစိုးရသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေးသဘောတူစာချုပ်ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ နှင့် ချုပ်ဆိုပြီးဖြစ်သော်လည်း အဖွဲ့အစည်း များစွာ ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသများတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ/ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSPP/SSA) ၏ ဌါနချုပ်ဖြစ်သော ဝမ်ဟိုင်းဒေသကို မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် မြေပြင်မှသာမက ဝေဟင်ကပါ အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ ထိခိုက်သေကြေ အိုးအိမ်များပျက်စီးခဲ့ရပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာလည်း တောတောင်များအကြား ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်။ ထို့ပြင် ပြည်သူလူထုအချို့ကို ဓါးစားခံအဖြစ် ရှောင်ထွက်၍မရအောင် ဟန့်တားထားသည်များလည်းရှိကြောင်း ကြားသိရသည်။ ဤသို့ တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ရှိနေပါက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၅။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကိုဦးတည်၍ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်ရေး နည်းဖြင့်ဖြေရှင်းနေမှုကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်၍ နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် လက်ရှိနှင့် နောက်တက် လာမည့်အစိုးရအဖွဲ့အား လေးနက်စွာ တောင်းဆိုပါသည်။
၆။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် လက်ရှိအစိုးရနှင့်လည်းကောင်း၊ နောက်တက်လာမည့် အစိုးရနှင့်လည်းကောင်း မိမိတို့ UNFC အနေဖြင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာ သွားရန် အဆင်သင့်ရှိပါကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
Tags: 2015 Elections, Human Rights, National League for Democracy, Restoration Council of Shan State/Shan State Army-South (RCSS/SSA-S), United Nationalities Federal Council